GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Lingala Lithuanian Malagasy Norwegian Nzema Oromo Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zulu
Na Baịbụl, ọ bụrụ na e kwuo na mmadụ nwere “okwukwe,” ihe ọ pụtara bụ na onye ahụ nwere ezigbo ihe mere o ji kwere ihe o kweere. Ọ bụrụ na mmadụ enwee okwukwe na Chineke, obi na-esi onye ahụ ike na Chineke ga-emezu nkwa niile o kwere.
OLEE OTÚ MOZIS SI GOSI NA YA NWERE OKWUKWE?
Ihe ndị Mozis mere gosiri na obi siri ya ike na nkwa niile Chineke kwere ga-emezu. (Jenesis 22:15-18) Ọ bụrụ na ọ chọrọ, ọ gaara ebi n’Ijipt na-ekpori ndụ otú masịrị ya. Ma ọ hapụrụ ihe niile ahụ ‘họrọ ka e megbukọta ya na ndị Chineke kama ịnụ ụtọ mmehie ruo nwa oge.’ (Ndị Hibru 11:25) Ọ̀ ga-abụ na Mozis echeghị echiche nke ọma tupu ya ahapụ ihe ndị ahụ? Mba. Gịnị mere anyị ji sị mba? Ọ bụ n’ihi na Baịbụl kwuru na Mozis “guzosiri ike dị ka à ga-asị na ọ na-ahụ onye ahụ anya bụ́ Onye a na-apụghị ịhụ anya.” (Ndị Hibru 11:27) Mozis hapụrụ ihe ndị ahụ n’ihi okwukwe o nwere. O nwekwanụghị mgbe ọ kwara mmakwaara na ọ hapụrụ ha.
Mozis gbalịkwara inyere ndị ọzọ aka ka ha nwee okwukwe na Chineke. Dị ka ihe atụ, mgbe ụmụ Izrel hapụrụ Ijipt ma rutewe Osimiri Uhie, ndị agha Fero chụụrụ ha na-abịa, ha anọrọzie ka ndị tọrọ atọ. Mgbe ụmụ Izrel chọpụtara ihe na-emenụ, ụjọ tụrụ ha, ha amalite ibesara Jehova na Mozis ákwá. Gịnịzi ka Mozis ga-eme?
O nwere ike ịbụ na Mozis amaghị na Chineke ga-eme ka Osimiri Uhie ahụ kewaa ka ụmụ Izrel si na ya gafee. N’agbanyeghị nke ahụ, obi siri ya ike na Chineke ga-echebe ndị ya. Mozis chọkwara ka obi sie ndị Izrel ibe ya ike otú o siri ya. Baịbụl kwuru, sị: “Mozis wee sị ndị Izrel: ‘Unu atụla egwu. Guzosienụ ike hụ nzọpụta Jehova, nke ọ ga-azọpụta unu taa.’” (Ọpụpụ 14:13) Ihe ahụ Mozis kwuru ò mere ka okwukwe ndị Izrel sie ike? N’eziokwu, o mere, n’ihi na Baịbụl kwuru banyere Mozis nakwa ụmụ Izrel niile, sị: “Ọ bụ okwukwe ka ha ji gafee Oké Osimiri Uhie dị ka à ga-asị na ọ bụ n’ala akọrọ.” (Ndị Hibru 11:29) Okwukwe Mozis baara ma Mozis ma ndị niile mụtara na ha kwesịrị inwe okwukwe na Chineke uru.
Anyị nwekwara ike ịdị ka Mozis ma ọ bụrụ na ihe ndị anyị na-eme egosi na obi siri anyị ike na Chineke ga-emezu nkwa ndị o kwere. Dị ka ihe atụ, Chineke kwere nkwa na ya ga-egboro anyị mkpa anyị ma ọ bụrụ na anyị ewere ofufe ya ka ihe kacha anyị mkpa. (Matiu 6:33) N’eziokwu, ime otú ahụ nwere ike isiri anyị ike ebe ọ bụ na ọtụtụ ndị na-achụ ego ọnwụ ọnwụ n’oge a. Ma obi kwesịrị isi anyị ike na ọ bụrụ na anyị ewere ofufe Chineke ka ihe kacha mkpa ná ndụ anyị, Jehova ga-egboro anyị mkpa anyị niile. O kwere anyị nkwa, sị: “M gaghị ahapụ gị ma ọlị, m gaghịkwa agbahapụ gị ma ọlị.”—Ndị Hibru 13:5.
Anyị kwesịkwara inyere ndị ọzọ aka ka ha nwee okwukwe na Chineke. Dị ka ihe atụ, ezigbo nne na nna maara na ha kwesịrị inyere ụmụ ha aka ka ha nwee okwukwe na Chineke. Mgbe ụmụaka na-eto, e kwesịrị ịkụziri ha na Chineke dị adị nakwa na ọ gwala ụmụ mmadụ ihe bụ́ ihe ọma na ihe ọjọọ. E kwesịrị ime ka o doo ha anya na ihe ga-akacha baara ha uru ná ndụ bụ ime uche Chineke. (Aịzaya 48:17, 18) Ihe kacha mma ndị nne na nna ga-emere ụmụ ha bụ ime ka ha nwee okwukwe na Chineke “dị adị, na ọ bụkwa onye na-akwụ ndị na-achọsi ya ike ụgwọ ọrụ.”—Ndị Hibru 11:6.